Recycled Christmas ịchọ mma: echiche na Atụmatụ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Mgbe ekeresimesi bịara, anyi choro ide mmiri mara mma na be anyi. Otu osila dị, anyị agaghị etinye nnukwu ego n’ịchọ ihe ịchọ mma nke anyị. Anyị nwere ike iji recycled Christmas decorations mbo mbuli anyị creativity mgbe azọpụta a bit na ịzụ ihe ịchọ mma na-echekwa.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ụfọdụ atụmatụ iji mee ka ihe ịchọ mma ekeresimesi rụọ ọrụ.
1 Recycled Christmas ịchọ mma
2 Echiche maka imegharị ihe ịchọ mma ekeresimesi
3 Osisi Krismas na akwa bọọlụ
Nwere ike iji uru nke ihe na-abaghịzi uru wee bụrụ ihe mkpofu iji mepụta ihe ịchọ mma ekeresimesi gị. Ihe kachasị dị mma bụ na anyị nwere ọtụtụ ihe nke, ọ bụrụ na anyị enye ya ụfọdụ ọgụgụ isi, anyị nwere ike ịme ọtụtụ n'ime ya. Yak ise ndusụk mmọ.
A na-eji iko plastik na-eme otu ihe ma chekwaa nke nta nke nta iji mee ka ha dị ọcha nke ọma ma jiri ya mee ihe ike ụfọdụ na-akpa ọchị snowmen. Nwere ike mfe nwere recycled Christmas decorations na a aka nke n'echiche. Enwere ọtụtụ ụzọ iji mee ka ihe si na snow site na ihe eji emegharị emegharị, naanị ị ga-eji echiche gị. Ihe mbụ ị bụ, ọ ga-aka mma ịchọ mma ahụ.
E nwere ike iji ihichapụ ihe ịchọ mma ekeresimesi emegharịrị ọzọ. E nwere ụfọdụ ndị mbụ echiche dị ka decorating ụlọ gị na Christmas garlands enweghị ego ọ bụla. I nwekwara ike iji ụfọdụ soda ma ọ bụ iko biya na ụfọdụ ngwa. Iji ụfọdụ ọrụ na nlekọta ị nwere ike ịme ihe ịchọ mma dị egwu.
A na-atụfu capsules Nespresso ọtụtụ mgbe. Ha bụ otu n'ime nnukwu mkpofu nke igwe kọfị na-ahapụ anyị n'ụlọ. Otú ọ dị, anyị nwere ike ịchọta azịza maka ya. Nsonaazụ a dị egwu ebe ọ bụ na enwere ike iji oriọna ndị a mee oriọna. Ga - agbakwunye capsules efu na ọkụ nke osisi Krismas gị iji nwee ọmarịcha mma.
Ọ bụrụ na anyị nwere pine cones ma chee na anyị nwere ike ịme ọrụ dị mfe nke mejupụtara ịme elves Christmas. A na-emegharịghachi ihe niile ma baa uru maka ịme ụmụaka na ụmụaka.
Echiche maka imegharị ihe ịchọ mma ekeresimesi
Nwere ike iji gia nke elekere, ihe egwuregwu ma ọ bụ ngwaọrụ elektrọnik ọ bụla nke agaghị eji mee osisi Krismas. Ihe ndị a niile nwere ike bụrụ ezigbo mma mbụ. Onye ọ bụla n’ime ha bụ nanị osisi Krismas gị. Naanị ọ dị mfe ịnwale iji ghọta na e nwere ihe ndị ị na-echeghị na ha nwere ike ịrụ ọrụ a.
Enwere ike iji Teacups mee mgbịrịgba mara mma. Naanị ị ga-eji brush na agba ụfọdụ iji tee ihe dị ka ụdị gị. Nwere ike iji eriri kegide ya na njikwa nke mkpọ ahụ ma kwụgidere ya ebe ọ bụla ịchọrọ. Ọ bụ usoro dị mfe na ngwa ngwa nke nwere ike ime ka ịmegharịrị hey.
I nwekwara ike ime ndozi ekeresimesi site na CD ochie. N’ezie ị nwere CD ma ọ bụ DVD ndị na-abaghị uru ọ bụla. Agbanyeghị, ịnwere ike ịnwale iji ihe na-egbuke egbuke mee ụfọdụ ihe ịchọ mma ekeresimesi. All ndị a echiche ga-eme ka ị na-recycled Christmas decorations nnọọ mfe na-ewere uru nke niile ihe.
N’ezie, enwere ike iji karama plastik mee ihe ịchọ mma ekeresimesi n’èzí. Karama plastik a tụrụ aro ka ị jiri bụ nke PET plastic. Ha na-adi ike inogide karie ebe oyi na n'èzí na-eme ka ihu iwe na-adighi nma. Ọ bụghị ihe na-akpali mmasị itinye oge buru ibu na-arụ ọrụ na imewe ka ọ ghara ịdịte aka.
Nwere ike ime penguuin site na iji ụfọdụ oriọna ọkụ ochie. Ọ na-ewe obere eserese, ichetụ n'echiche na oge ụfọdụ. Ọ na-abụkarị ihe dị mma iji uru niile ị nwere. Buru n'uche na emegharịrị ihe ịchọ mma ekeresimesi dị ka ihe okike na nke izizi. Akụkụ ọzọ ịlele anya bụ omume nke ịzụta ihe eji eme enyi na gburugburu ebe obibi. Agbanyeghị na ha bụ ihe nwere obere mmetụta gburugburu ebe obibi ma na-emegharị ya ọzọ, ọ na-eduga ọtụtụ ndị mmadụ na-eto eto na-eto eto. Ọ bụghị n'ihi na ọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ enyi na gburugburu ebe obibi, ị ga-anọgide na-azụ. Nwere ike ịme ihe ndị ahụ n'onwe gị. Ọ bụ naanị ezigbo ụzọ iji megharịa mkpofu kpamkpam.
Osisi Krismas na akwa bọọlụ
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ na-eji osisi plastik eme ihe ọtụtụ afọ, ị nwere ike iji echiche gị mepụta osisi Krismas site na ihe eji emegharị ọzọ. Naanị anyị kwesịrị itinye n'otu ite, ite, igbe kaadiboodu ma obu ihe obula nke di obere unyi na okwute. Anyị na-amalite itinye alaka dị iche iche nke nha dịgasị iche iche anyị nwere ike ịchọta n'oké ọhịa ma daa site na osisi. Enwere ike ijikọ ha n'etiti ha ka ha wee nwee ike karị ma nwee ụdị osisi dị mma.
Ozugbo alaka ndị ahụ dị, anyị nwere ike itinyekwu ụwa na nkume ka ha wee sie ike. Zọ ọzọ bụ iwere ite anyị n’uwe anyị na-anaghị eji. Cheta na oburu na oge ekeresimesi gafere ma alaka di na odi nma, odi nma iweghachi ha na agwa.
Anyị maara na bọọlụ plastik na-agbaji ngwa ngwa. Ihe kachasị mma bụ na ọ bụ bọọlụ Ekeresimesi dara n'ala wee gwụchaa. Nwere ike iji iberibe iberibe ákwà ochie wee gbanye bọọlụ Ekeresimesi. Maka ime ị nwere ike iji mpempe akwụkwọ aluminom ma ọ bụ ụdị kaadiboodu ma mee ya. Enwere ike iji akwa ahụ ọzọ mgbe afọ ole na ole ga-achọ mkpuchi nke ite iko ahụ. Zọ a, i nwere ike inye mmadụ ụfọdụ kuki arụrụ n'ụlọ, jam ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Ihe na-adọrọ mmasị banyere ihe a niile na-anwa iji ihe mkpofu mee ihe na-abaghịzi anyị uru. Maka ụdị ihe ịchọ mma, enweghị iwu. Enwere ike ịnabata echiche ọ bụla iji chọọ ụlọ gị mma n'ụdị gị. Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere echiche ole na ole ma enwere ọtụtụ ndị ọzọ chọrọ echiche gị na nraranye ụfọdụ iji nwee nsonaazụ dị mma ma weghachite ihe anaghị arụ ọrụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere otu esi emezi ihe ịchọ mma ekeresimesi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Recycled Christmas ịchọ mma
Gba ala na karama